KULINDELEKE BAPHINDE BASHAYE INTO ECOKEME ABAFANA BES’THENDE – Sivubela intuthuko Newspaper
Umdlali odlala emuva kwiLamontville Golden Arrows oseyisilomo ngokuvalela abagadli abangabambeki.
IQEMBU iLamontville Golden Arrows ehleli endaweni yesikhombisa etafuleni lwemidlalo ye-ABSA Premiership elisanda kubambana namaBhakabhaka eSugar Ray Xulu Stadium eClermont izophinda ibhekane neBlack Leopards ngomhlaka-5 kuMbasa khona eClermont.
Umqeqeshi waleli qembu uSteve Kompela uncome iqembu lakhe ngokudlala ngokulinganayo ne-Orlando Pirates emdlalweni ogcine uphele ngo 0 : 0. “Bakhombise ubumbano abadlali abadlala emuva kangangokuba umdlali uNkosinathi Sibisi uqokwe njengomdlali wosuku. Bonke abanye uSiyabonga Dube, Lunga Devine noMatome Mathiane bebelekelelana kahle kakhulu,” kubeka uKompela. Labadlali bebemhleli izithonto uGabadinho Mhango njengoba aziwa ukuthi ungumgadli ohlala ephuma negoli okuyimanje osefake amagoli ayi-14 kwezimnyama kule ligi.
Uthe bazimisele ngokuqinisa kubadlali abadlala phambili nasebeqalile ukuthungatha umdlali ovelele ozolekelela abagadli abanabo njengamanje okunguKnox Mutizwa kanye no Lerato Lamola. “Kungaba ngcono kakhulu uma singathola umdlali ozogadla abuye negoli emdlalweni ngamunye,” kuqhuba uKompela.
Leli qembu lizitholele iphuzu elilodwa kulomdlalo labe selihlala namaphuzu angama-32 ewaqoqe emidlalweni engama-23 eseliwadlalile, kuyona leyomidlalo linqobe eyi-8 lahlulwa kweyi-7 labe selidlala ngokulinganayo kweyi-8.
Kulindeleke ukuthi libhekane ne-Stellenbosch eParow Park Stadium eCape Town ngesonto mhla zingama-22 kuMashi emdlalweni we-ABSA Premiership ebese liyaqala lizilolongele umdlalo wayo neBlack Leopard.